COVID-19 (Coronavirus) ईमेल मार्केटिंग को प्रवृत्ति - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक मार्च 20, 2021 मार्च 18, 2021 एलेक्स Lysak अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, Gigs किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्, Gigs किन्नुहोस्, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, gigs, बिक्रीको लागि Gigs, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, Gigs पोष्ट गर्नुहोस्, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, गिगहरू बेच्नुहोस्, तपाईंको Gigs विश्वव्यापी रूपमा बेच्नुहोस्, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, साइड Gigs, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
जब तपाइँ एक वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाइँ सायद एक पप-अप सूचना देख्नुहुनेछ जुन तपाइँलाई वेबसाइटको न्यूजलेटरको सदस्यता लिन सोध्नु भएको छ। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि किन उनीहरूले त्यसो गर्छन्?
लगभग सबै व्यवसाय को लागी यसको अपरेशन अनलाईन लाई सारियो।
सदस्यहरूले सन्देशहरूको प्रकार छनौट गर्न सक्दछन् जुन उनीहरू ईनबक्समा हेर्न चाहन्छन्।
१ 1978 19 मा पहिलो मार्केटिंग ईमेल ड्राफ्ट हुँदा पठाइएका ईमेलहरूको प्रकारहरू हामीसँग आज जस्तो छैन। पछिल्ला केही दशकहरूमा यस क्षेत्रमा पनि परिवर्तन देखिएको छ। कोविड - १ p महामारी धेरै व्यक्तिको लागि वेक अप कल जस्तै थियो र व्यक्तिले कसरी व्यवसाय गर्ने भन्नेमा परिवर्तन आएको छ।
यस लेखमा, हाम्रो विज्ञ एलेक्स Lysak ईमेल मार्केटिंग, यो व्यापार को लागी कती फाइदाजनक छ, र भविष्य को लागी के बारे मा रोशन हुनेछ। उनका लेखहरू पढिरहनुहोस् यहाँ.
के तपाईं गत हप्तामा प्राप्त प्रमोशनल सन्देशहरूको संख्या सम्झन सक्नुहुन्छ? सम्भवतः होईन।
ईमेल संचारको सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने रूपहरू हुन् जुन लामो अवधिको लागि अस्तित्वमा छ। यो प्राय: धेरै जसो अफिसहरुमा प्रयोग गरिन्छ, अन्यले उनीहरुको व्यवसायमा। यो एक गोपनीय संचार मोड पनि हो जसले प्रापक र प्रेषकको डेटालाई महत्त्व दिन्छ।
ईमेल मार्केटिंग भनेको के हो?
जब तपाइँ एक वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाइँ सायद एक पप-अप सूचना देख्नुहुनेछ जुन तपाइँलाई वेबसाइटको सदस्यता लिन भन्दै छ समाचार पत्र। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि किन उनीहरूले त्यसो गर्छन्? पहिले, तिनीहरू तपाईको डेटा प्राप्त गर्न चाहन्छन्, उदाहरणका लागि, ईमेल ठेगाना र अन्य आवश्यक सम्पर्क विवरणहरू। दोस्रो, तिनीहरू तपाइँ र उनीहरूका उत्पादनहरूको बारेमा ईमेल पठाउन चाहान्छन्।
ईमेल मार्केटिमा अनिवार्य रूपमा नयाँ सेवाहरू र उत्पादनहरू बारे जानकारीपूर्ण सन्देशहरू समावेश गर्दछ। सेवाहरू र उत्पादनहरू ती हुन सक्छन् जुन त्यहाँ भएको थियो, तर मेल प्रयोग गरिन्छ ग्राहकहरूलाई जोड दिनको लागि। पठाइएका सन्देशहरू व्यवसायमा बिक्री ल्याउनको लागि व्यवसायिकृत गरियो।
एक व्यवसाय मालिक को रूप मा, रूपान्तरण छैन कि धेरै ईमेल पठाउन को कुनै सार छैन। तपाईंले आफ्ना मेलहरू क्राफ्ट गर्नुपर्दछ तपाईंको ग्राहकहरूलाई उनीहरूलाई प्रभावशाली बनाउन। तपाईको इ-मेलहरूमा पनि एलिशन एलिमेन्टमा कल हुनुपर्दछ जुन ग्राहकहरुलाई कार्य गर्न प्रेरित गर्दछ।
ईमेल मार्केटिंगका प्रकारहरू
उल्लेख गरिएझैं ईमेलले व्यवसायका लागि कोठा सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जुन उनीहरूका उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको उत्पादनहरू, प्रस्तावहरू र आउँदो प्रोजेक्टहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छन्। ईमेलहरू ग्राहकहरूलाई सूचित गर्न आवश्यक छ किनकि यसले व्यापारलाई उनीहरूसँग सीधा कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ।
तिनीहरू नयाँ उत्पादहरू र अवस्थित उत्पादहरू जुन व्यवसायले प्रस्ताव गरिरहेको छ भनेर प्रचार गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू लगभग जानकारीपूर्ण ईमेल जस्तै हुन्, केवल कि तिनीहरूले ड्राइविंग बिक्री मा ध्यान केन्द्रित। तिनीहरूलाई सिर्जना गर्दा, तपाईंले उत्पादनहरू किन्नको लागि विश्वस्त पार्ने टोन प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
कोविड १ id को बीचमा ईमेल मार्केटिंगको महत्व
धेरै व्यवसायहरूको लागि लागत प्रभावी विधि
प्रकोप पछि, व्यवसायको बहुमत 'राजस्व धेरै कम भएको छ। त्यो कार्यबल को कटौती को कारण हो।
प्रायः कर्मचारीहरू घरबाट काम गर्दै आएका छन्, यसैले उत्पादकता कम हुनेछ। यो केवल आवश्यक सेवा प्रदायकहरू छन् जुन काम गरिरहेछन्। यस्ता सेवाहरू प्रदान नगर्ने व्यवसायहरूले राजस्वमा कमी भएको अनुभव गरे त्यसैले मार्केटिंग गतिविधिहरूमा बढी खर्च गर्न सक्दैनन्।
जहाँसम्म, ईमेल मार्केटिंगको साथ, यो सम्भव भयो किनकि केवल ग्राहकहरूको सूची आवश्यक थियो। सान्दर्भिक सामग्री सिर्जना गरेपछि, यो तिनीहरूलाई पठाउन सस्तो भयो, यो धेरै व्यवसायहरूको लागि एक प्रभावकारी विधि बनाउँदै।
ईमेल मार्केटिंगले ग्राहकहरूको खर्च गर्ने समय कम गर्दछ
कोभिड -१ place ठाँउमा, ग्राहकहरूले अन्तिम चीजको व्यर्थका लागि चाहेको अन्तिम कुरा हो। धेरै व्यवसायहरूले ईमेल मार्केटिंग रणनीति प्रयोग गरेर ग्राहकहरूलाई उनीहरूलाई चाहिने उत्पादनहरू छनौट गर्न मद्दत गर्दछ। त्यो छोटो समयमा हुन्छ। यसले कर्मचारीहरूको समय बचत गर्दछ किनभने ग्राहकहरूलाई पहिले नै थाहा हुन्छ उनीहरू वास्तवमै के चाहन्छन्।
ब्राण्ड जागरूकता बढाइयो
लगभग सबै व्यवसाय को लागी यसको अपरेशन अनलाईन लाई सारियो। तिनीहरू सबै आफ्नो अवस्थित र नयाँ ग्राहकहरूको ध्यान लिन कोशिस गर्दैछन्। साथै, तिनीहरू आफ्ना ग्राहकहरु सम्म पुग्न विभिन्न मार्केटिंग रणनीतिहरु प्रयोग गर्छन्। रणनीतिको अंश ईमेल मार्केटिंग हो।
यसले व्यवसायहरूलाई उनीहरूको ग्राहकहरूको इनबक्सहरूमा जान र सन्देश सीधा डेलिभर गर्न अनुमति दिन्छ। एक पटक ती सन्देशहरू मार्फत जाने ग्राहकहरूको ध्यान आकर्शित गर्दै।
वफादार ग्राहकहरुलाई कायम राख्न मद्दत गरेको छ
ईमेलहरूले व्यवसायहरूलाई महामारीको समयमा आफ्ना ग्राहकहरूसँग जडित रहन मद्दत गर्दछ। यसको कारण तिनीहरू मध्ये अधिकांश शारीरिक स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा छन् विश्व स्वास्थ्य संगठन निर्देशिकाहरू पालन गर्न।
सन्देशहरू पठाउँदा उनीहरूको सेवाहरू अनलाइन र अफलाइन दुबै सुधार गर्न प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ, जसले तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन्छ।
कोविड १ during को बखत ईमेल मार्केटिंग प्रवृत्तिहरू
चीजहरू समय-समयमा गर्ने क्रममा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। वास्तवमा टेक्नोलोजिकल एन्हान्समेन्टले ल्याएको भूमण्डलीकरणको साथ, चीजहरू अझै पनी परिवर्तन हुन सक्ने मानिन्छ।
त्यस्तै, ईमेल मार्केटिंग प्रयोग गर्ने व्यवसायले महामारीको समयमा उन्नत चलनहरू पनि अपनाएको छ। तल ती मध्येका केही छन्। भविष्यको ईमेल मार्केटिंगका लागि उनीहरू धेरै अर्थ राख्छन्। चिन्तित नहुनुहोस् किनभने तपाईं विशेषज्ञहरुसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ Scanteam यसको बारेमा कसरी जान्ने भनेर बुझ्न।
ईमेल मार्केटिमा अनिवार्य रूपमा नयाँ सेवाहरू र उत्पादनहरू बारे जानकारीपूर्ण सन्देशहरू समावेश गर्दछ।
भिडियोहरू र एनिमेसनहरूको प्रयोग
के तपाईं गत हप्तामा प्राप्त प्रमोशनल सन्देशहरूको संख्या सम्झन सक्नुहुन्छ? सम्भवतः होईन। यसको मतलब त्यो हो कि एक महिनामा, तपाई साप्ताहिक रूपमा प्राप्त गरेको भन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
धेरै व्यक्तिको ईनबक्सहरू धेरै प्रोमोशनल सन्देशहरूले भरिएका हुन्छन् किनकी कम्पनीहरूले उनीहरूका अधिकांश कामहरू अनलाइन स्थानान्तरण गरेका छन्।
यद्यपि, केहि कम्पनीहरूले बाहिर उभिनको नयाँ कलामा महारत हासिल गरेका छन्। तिनीहरूले संलग्न भिडियो उनीहरूको अधिकांश ईमेलहरूमा। यो एक विश्वास हो कि धेरै व्यक्तिहरु पढ्नु भन्दा भिडियोहरू हेर्न मन पराउँछन्। त्यसकारण, जब कम्पनीहरूले भिडियोहरू प्रयोग गर्छन्, यसले उनीहरूलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा बढि बनाउन अनुमति दिन्छ।
अन्तर्क्रियात्मक मेलहरूको प्रयोग बढ्यो
के तपाइँ एक सर्वेक्षण भर्न वा कार्य गर्न जोडिएको कलमा कार्य गर्न सोध्नु भएको ईमेलहरूमा आउनु भएको छ? यदि हो, त्यसो भए त्यो के हो। कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया लिन त्यस्ता रणनीतिहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्।
प्रतिक्रिया धेरै तरीकामा कम्पनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। पहिले, यसले उनीहरूलाई उनीहरूको सामर्थ्य र कमजोरीहरू पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ। यसले उनीहरूलाई आफ्नो वफादार र सक्रिय ग्राहकहरू चिन्न सक्षम गर्दछ।
ईमेल मार्केटिंगमा एआई
कृत्रिम बुद्धिको प्रयोग कोरोनाभाइरस ईमेल प्रवृति मध्ये एक हो। यसले व्यवसायमा ल्याउने अथाह फाइदाहरूको बावजुद केहि बजारहरू डराउँछन्।
धेरै कम्पनीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई उनीहरूको रणनीतिको अंशको रूपमा मूल्य दिन्छ। यो तिनीहरूको लागि उत्तम कार्य गर्दछ किनकि यसले उनीहरूका ग्राहकहरूलाई निजीकृत सन्देशहरू प्रदान गर्दछ। साथै, कृत्रिम बुद्धि प्रत्येक मेल र वितरण समय को लागी सबै भन्दा राम्रो विषय लाईन रोज्न सक्नुहुन्छ। मानवीय ड्राफ्ट गरिएका सन्देशहरूको तुलनामा यो उत्तम काम गर्दछ।
यो साना व्यवसायहरूमा पहुँच योग्य छ किनकि प्राय जसो ईमेल सेवा प्रदायकहरूले उनीहरूको प्रणालीहरूमा यसलाई स्वीकार्न थालेका छन्। त्यसले लगभग प्रत्येक व्यवसायलाई सस्तो बनाउँदछ जुन सुरु हुँदैछ।
सदस्यता प्राथमिकता नियन्त्रण
प्रारम्भमा, एउटा न्यूजलेटरको सदस्यता पछि, कम्पनीले तपाईंको इनबक्समा एक अनियमित सन्देश प्रदान गर्दछ। जे होस्, २०२० मा ईमेल मार्केटि effective प्रभावकारी प्रवृत्तिले व्यवसायलाई उनीहरूको ग्राहकहरूलाई छनौटको स्वतन्त्रता दिन अनुमति दिन्छ।
सदस्यहरूले सन्देशहरूको प्रकार छनौट गर्न सक्दछन् जुन उनीहरू ईनबक्समा हेर्न चाहन्छन्। त्यो, नतिजाको रूपमा, कम्पनीहरूले तिनीहरूलाई पठाउनको सन्देशहरूको प्रकार थाहा दिन्छ।
प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री वृद्धि भयो
धेरै मार्केटरहरू र व्यवसायीहरूको चालले प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री सिर्जना गर्दैछ। एक उदाहरण उत्पादन समीक्षा को उपयोग को लागी ग्राहकहरु लाई बिक्री मा उत्पादनहरु को बारे मा अधिक जानकारी छ।
यदि यो त्यस्तो उत्पादन हो जसलाई प्राविधिक ज्ञान चाहिन्छ भने उत्पाद समीक्षाले खरीदकर्ताहरू वा सम्भाव्यताहरूलाई यसलाई कसरी अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
ग्राहक प्रशंसापत्र पनि प्रयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री को हिस्सा। तिनीहरू ग्राहकको व्यापारको वैधता र गुणस्तर उत्पादनहरूको बारेमा देखाउन मद्दत गर्दछ।
कसरी ईमेल मार्केटिंगको साथ सुरू गर्ने?
कसरी ईमेल मार्केटिंग एक व्यवसायको लागि राम्रो छ पढेपछि, तपाइँ यसलाई तपाइँको व्यवसायमा प्रयोग गर्न पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, तपाइँ कसरी सुरू गर्ने भन्नेमा फस्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई मद्दत गर्न, तपाईं तलका चरणहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिले आफ्नो लक्ष्य स्थापना गर्नुहोस्
सुरू गर्नु अघि, तपाईंले ईमेल मार्केटिंग किन प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भनेर जान्नु आवश्यक छ। तपाइँले तपाइँको लक्षित श्रोतालाई पनि थाहा पाउनुपर्दछ। त्यसो गर्दा तपाइँको लागत मा ठूलो बचत हुनेछ।
तपाईको इ-मेल सेवा प्रदायक छान्नुहोस्
तपाइँका लक्ष्यहरू थाहा पाएर र तिनीहरूलाई ठीक सेट गरेपछि, तपाइँ एक राम्रो मेल सेवा प्रदायक चयन गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो प्रदाता पाउने सार यसको कारण हो कि ईमेल मार्केटि man म्यानुअल्ली गर्न कठिन लाग्न सक्छ। चीजहरू हुनको लागि तपाईंले स्मार्ट उपकरणहरूको उपयोग गर्न आवश्यक छ।
सम्पर्क सूची निर्माणमा फोकस गर्नुहोस्
सुरु गर्ने उत्तम तरिका भनेको राम्रो सम्पर्क सूची हुनु हो। "सदस्यता" विकल्पको साथ न्यूजलेटरहरू सिर्जना गरेर तपाईं यो सम्भव बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि यसलाई पढ्नेहरूले सदस्यता लिन सक्छन्। तपाईं एक अप्ट-इन फारम पनि राख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको ग्राहकहरूले तपाईंलाई अपेक्षा गरेको कार्यहरू देख्नेछन्।
सम्पर्क सूची सिर्जना गरेपछि, तपाईं ग्राहकहरूलाई ईमेल पठाउन सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले पनि उनीहरूले मनपराउनु भएको कोठा नोट गर्नुपर्दछ ताकि तपाईं गलत सन्देशहरू पठाउनुहुन्न। जहाँसम्म, यदि तपाईं अडिग महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यसको बारेमा अझ बढी जान्नको लागि थप अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ।
माथिका केवल साधारण ईमेल मार्केटिंग उत्तम अभ्यासहरू २०२० हुन् जसले मार्केटिंग क्षेत्रमा क्रान्ति ल्यायो। अब तपाई २०२१ का लागि ईमेल मार्केटिंग पूर्वानुमान गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। ट्रेंडहरू खोजिरहनुहोस्, र यस क्षेत्रमा नेताहरू अवलोकन गर्न नबिर्सनुहोस्।
सांप्रदायिक समाचार कोभिड 19 इमेल मार्केटिङ प्रचलन बजार अनुसन्धान
एलेक्स Lysak ScanTeam को मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो। म २०११ पछि अनलाइन मार्केटिंगमा काम गर्दैछु, मेरो विशेषज्ञताका मुख्य क्षेत्रहरू मार्केटि research अनुसन्धान, सामाजिक मिडिया मार्केटि,, र SEO हो। Of बर्षको अनुभवको बखत, मैले धेरै उत्पादनहरू र स्टार्टअपहरूलाई मार्केटिंग रणनीतिहरू विकास गर्न र तिनीहरूलाई लागू गर्न मद्दत गरेको छु।
घन जूट्स के हो? नम्बरको घन जड कसरी फेला पार्ने?